IJAAN QALAAN KAL’OO HIN URRE !!! – Welcome to bilisummaa
13 . Bishaan dhugaatii ummata oromoof kan jalqabaaf bu’uuree fi ummata biraan gahaa tureedha . Daandii konkolaataa magaalarra gurguddoo irra magaalalee wal qunnamsiisuu fi baadiyaa keessa akka diriiru kan godheedha
Tokkoffaa, Obboo Jundeeddiin gadi bayee waan ta’e hundaa uummata isaatti ibsuu fi achumaanis dhiifama gaafatee, xinnaatullee boqonnaa sammuu akka argatu carraa isaaf bana ture.
Lammaffaa ammoo, innumtuu (Juneeddiin) waayee kana dubbachuuf fedhii kan qabaatu yoo ta’e, mootummaa Wayyaanee keessatti nama bakkee guddaa (taayitaa olaanaa) qabaachaa ture waan ta’eef (badii inni uummata Oromoorratti dalage akkuma jirutti ta’ee jechuu kooti) waan diinni godhaa ture fi jiru akka saaxilu fi hawaasota addunyaatti akka himu malaan ittifayyadamuun ni danda’ama ture.
Previous Addunyaa qaroomtee irraa booda hafnee ,osoo afaan qabnuu dubbachuu dadhabnee…
Next OMO VALLEY TRIBES -THE VANISHING CULTURES OF ETHIOPIA